2019-06-25 20:03:45 ,မင်္ဂလာရှိ​သော ​နေ့ရက်​များစွာကု…
မင်္ဂလာရှိ​သော ​နေ့ရက်​များစွာကိုပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေ 🙏 🙏 🙏
သင်​ အလုပ်​လိုနေပြီလား? ……. အင်​တာဗျူး​တွေဖြေဆိုဖို့​ရော အဆင်​သင့်​ဖြစ်​​နေပြီလား? ……. သင်​သာ အမှန်​တကယ်​အလုပ်​ဝင်​​နိုင်​ပြီဆိုပါက #NEW_LIGHT_Agency မှ အထူးအခွင့်​အ​ရေး​ကောင်းကြီးတစ်​ရပ်​ကို​ချပြလိုက်​ပါပြီ 🎉🎉🎉
ဇွန်​လမကုန်​ခင်​မှာ သင်​အလုပ်​ရဖို့အတွက်​ #NEW_LIGHT_Agency က ကူညီ​ပေးသွားမှာပါ 😍 😍 မိမိ​နေထိုင်​ရာမြို့နယ်​နှင့်​ နီးစပ်​ရမည်​။ မိမိအရည်​အချင်းနှင့်​ကိုက်​ညီ​သော လစာ​ကောင်းရ​စေရမည်​ဟု အာမခံချက်​​ပေးထားသည်​ 💯💯💯
ရန်​ကုန်​မြို့တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် လိုအပ်​လျက်​ရှိ​သော ရာထူး​ကောင်းများစွာကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ #NEW_LIGHT_Agency တွင်​ ဇွန်​လ ၁၈ရက်​​နေ့မှ ၃၀ရက်​​နေ့ထိ CV ​ဖောင်​ဖြည့်​ပြီး အလုပ်​ဝင်​လိုက်​ပါ။
💞💞💞 💞💞💞 💞💞💞 💞💞💞 💞💞💞
(1) Senior Accountant – ကျား/မ (၅၀)ဦး…ဘွဲ့ရ/LCCI (III)ပြီး/Exp5နှစ်​
လစာ – ၆သိန်း မှ ၁၀သိန်းဝန်းကျင်​
(2) Junior Accountant – ကျား/မ (၄၂)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/LCCI (II)ပြီး
လစာ – ၂သိန်း မှ ၅သိန်းဝန်းကျင်​
(3) Modern Trade Supervisor – ကျား/မ (၄၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/Exp 2နှစ်​
လစာ – ၃သိန်း မှ ၅သိန်းဝန်းကျင်​
(4) Admin Staff – ကျား/မ (၃၀)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp 1နှစ်​
လစာ – ၂သိန်း မှ ၃သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(5) Office Staff / Customer Service – ကျား/မ (၆၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/Computer Basic ရ
လစာ – ၂သိန်း မှ ၃သိန်းဝန်းကျင်​
(6) Sale Girl – မ (၈၀)ဦး…၁၀တန်း (သို့) ​အောင်​
လစာ – ၁သိန်း ၈​သောင်း မှ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(7) Sale & Marketing Assistant – ကျား/မ (၁၀၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ
လစာ – ၁သိန်းခွဲ မှ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(8) Sale Teams Leader – ကျား/မ (၃၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/Exp 2နှစ်​အထက်​
လစာ – ၂သိန်းခွဲ မှ ၄သိန်းဝန်းကျင်​
(9) Sale Admin – ကျား/မ (၅၇)ဦး…ဘွဲ့ရ/Computer ရ/Exp 2နှစ်​
လစာ – ၃သိန်း မှ ၄သိန်းဝန်းကျင်​
(10) Sale & Marketing Supervisor – ကျား/မ (၄၀)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp 3နှစ်​
လစာ – ၃သိန်းခွဲ မှ ၅သိန်းဝန်းကျင်​
(11) Sale & Marketing Manager – ကျား/မ (၄၅)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp 5နှစ်​
လစာ – ၇သိန်း မှ ၁၀သိန်းဝန်းကျင်​
(12) Operation Executive – ကျား/မ (၃၀)ဦး…ဘွဲ့ရ/Computer Basic/Exp 4နှစ်​
လစာ – ၅သိန်း မှ ၈သိန်းဝန်းကျင်​
(13) Photoshop / Graphic Designer – ကျား/မ (၄၇)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/Exp 1နှစ်​
(14) Store & Logistics Staff – ကျား/မ (၅၀)ဦး…၁၀တန်း (သို့) ​အောင်​
(15) Store Supervisor – ကျား/မ (၃၅)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp 2နှစ်​
(16) Delivery / Production Staff – ကျား/မ (၅၀)ဦး…၁၀တန်း (သို့) ​အောင်​
လစာ – ၂သိန်းဝန်းကျင်​
(17) Purcahsing Officer – ကျား/မ (၃၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​/Exp ၂နှစ်​
လစာ – 400000 ဝန်းကျင်​
(18) Export & Import Officer – ကျား/မ (၃၉)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp ၃နှစ်​
လစာ – 350000 မှ 500000 ဝန်းကျင်​
(19) Data Entry – ကျား/မ (၅၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/Computer Basic, Excel
လစာ – ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(20) Office Cashier – ကျား/မ (၄၅)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​/Excel ကျွမ်းကျင်​
(21) Tele Marketing Staff – ကျား/မ (၄၂)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ
(22) Stock Controller – ကျား/မ (၃၀)ဦး…၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/Computer Baisc, Excel ရ
(23) Translators (Chinese, English, Japanese) – ကျား/မ (၂၀)ဦး (မိမိကျွမ်းကျင်​ရာ ဘာသာရပ်​ကို ​လျောက်​ထားနိုင်​သည်​။)
လစာ – ၄သိန်း မှ ၇သိန်းဝန်းကျင်​
(24) IT Staff – ကျား/မ (၄၀)ဦး…ဘွဲ့ရ/Exp 1နှစ်​
လစာ- ၂သိန်း မှ ၄သိန်းဝန်းကျင်​
(25) Driver / Sale Driver – ကျား (၃၀)ဦး…လစာ – ၂သိန်း မှ ၄သိန်းဝန်းကျင်​ (Down Town မြို့ထဲပိုင်း​နေသူဦးစား​ပေးမည်​။)
အလုပ်​​လျောက်ရန်​ – ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ 📷
– ရပ်ကွက်၊ရဲစခန်း​ထောက်ခံစာ 📝 📝
– မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊အိမ်​​ထောင်​စုစာရင်းမိတ္ထူ 📜 တို့နှင့်တကွလူကိုယ်တိုင် (သို့)​ ကိုယ်​စားလာလျောက်ရပါမည်။​ ​ဖောင်ကြေး (၇၀၀၀)ကျပ်တစ်ခါသာသွင်းပြီး Register လုပ်​၇ပါမည်။အလုပ်မရမချင်းရှာပေးပြီး ရလျှင်မည်သည့်
🏚️ 🏚️လိပ်စာ – အမှတ်​ ၉၀၀, သမိုင်း​ဈေးဘူတာ ၂လမ်း, ၁ရပ်​ကွက်​, မရမ်းကုန်းမြို့နယ်​။(သမိုင်း​ဈေးဘူတာ မှတ်​တိုင်​ဆင်းပါ။)
၇ုံးချိန်​ – နံနက်(၉)ခွဲမှ(၅)ထိဖွင့်သည်။တနင်္ဂ​နွေနှင့်​ အစိုးရ၇ုံးပိတ်​ရက်​များပိတ်​သည်​။
☎️ ဖုန်း – 09403949900, 09895515671, 09446985156, 09402498806, 09893737863, 09404100823, 09263735145
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-06-25 by admin.
← 2019-06-25 20:03:35 ,###### URGENT REQUIREMENT ####… 2019-06-25 20:03:47 ,Sale Staff Job Description … →
2019-09-20 21:03:05 ,ပိတ်​ရက်​အတွင်း CV Form ​ပေးပ…
2019-09-20 21:03:02 ,Job Requirement – တက္ကသိုလ်​မှ…
2019-09-20 21:03:00 , ဗိုလ်​တစ်​​ထောင်​မြို့နယ် ရှိ…
2019-09-20 21:02:53 ,အမြန်လိုအပ်နေသည့် ရာထူး ( ၅၀ )…
2019-09-20 21:02:48 ,အရောင်းဝန်ထမ်း၊ အကြီးတန်းဝန်ထမ…